I-Recipe Meatballs ne pepper e-sweet in sauce emuncu
Indlu yasekhaya Recipes Okunye Izithako Iziqholo kunye neziqholo Lwesardard
Iimidlalo zeepilisi ezinomsila onomnandi kwi-sauce e-creamyard
Silungiselela i-meatball kwi-oven microwave. Lezi zibhola zenyama zilungiselelwe kwi-sauce e-creamyard edibeneyo kunye neentlobo ezimbini zesardadi-isiFrentshi kunye ne-"Russian"! Iilatballs kwi microwaves azilungiselelwanga ngokukhawuleza, kodwa umphumo uhle kakhulu. Ilayisi kwinyama enciniweyo Ndongeze i-eluhlaza - kwinkqubo yokulungiselela i-sauce ifakwe emzimbeni, irayisi iyalungiswa ngokusemgangathweni kwiphunga lesenyama kunye ne-sauce, ixutywe ngama-flavour kunye nama-flavour, ngenxa yoko, i-meatballs zihle kakhulu! Ezi nyama zenyama zingapheka ngaphandle kweengxaki ehovini! Ukukhonza iibhola ze-anyanisi zithatyathwa kwiviniga ye-balsam
Ilayisi ye-rice ejikelezayo 60 g
Ityuwa 0.75 tsp.
I-Mustard 2 tsp.
I-Mustard yesiFrentshi (kunye neenhlamvu) 2 tsp.
Amanzi 125 ml
Inyathelo 1 Ukulungiselela ama-meatballs ne-sweet pepper kwi-sauce enomsila omuncu sidinga le mikhiqizo elandelayo: i-ngulube enqotyisiweyo, iqanda le-inkukhu, i-pepper e-sweet, i-anyanisi, i-garlic, ilayisi, i-anyanisi, i-garlic, isardard, i-mustard kunye ne-mustard, i-sunflower ecocekileyo ioli, ityuwa, umsila omnyama , iparsley.
Inyathelo 2 Hlanganisa ingulube egayiweyo, ilayisi eluhlaza, i-pepper ecoliweyo, i-garlic kunye no-anyanisi.
Inyathelo 3 Dlulisa iqanda, ityuwa kunye nepelepele ukula.
Inyathelo 4 Hlanganisa kakuhle inyama enqabileyo.
Inyathelo lesi-5 Silungiselela i-sauce encinci yesardard. Kwi-pan yokucoca uthele ioli ye-solide ecocekileyo, yongeza ukhilimu omuncu, i-French kunye nesardard eqhelekileyo, ityuwa, umnyama omnyama.
Isinyathelo 6 Gaya iparsley uze uyifake kwi-sauce. Sifaka umlilo, sifudumala malunga nemizuzu emithathu ngokushisa okuphakathi. Siphalaza emanzini, vumela i-sauce ibilise kwaye isuse emlilweni.
Inyathelo lesi-7 Senza ama-meatball amancinci omzimba ofanayo kunye nobukhulu bezilwanyana ezigqithisiweyo. Ukususela kule mali yokugaya ndifumana i-cutlets ezili-9.
Isinyathelo 8 Kwiitya ze-oven microwave siphalaza i-sauce, sibeke i-meatballs kuyo, inokwenzeka ngokukhawuleza. Sifaka kwi-microwave ngamandla angama-800 watts. Silungiselela imizuzu engama-20 yokuqala, siyixubha ngokuphindaphindiweyo kabili, ukuze i-sauce isasazwe ngokufanayo.
Inyathelo 9 Emva koko, phumani, khawuleza ujike iibhola zezilwanyana uze uphinde ubuye umva kwimini eyi-10, uze uyibuyisele kwakhona uphinde upheke imizuzu eyi-10. Shiya iibhola zezilwanyana kwiikovuni ze-microwaves enye imizuzu emihlanu. I-sauce phantse yonke ibanjwe kwi-meatballs! Sisebenzela isitya esitshisa, ukuze sihlolisise.
Ingulube yengulube kunye nesardadi
Ingxoxo evela kwiipulo
Iimayonnaise kwiiqanda zesiqhekeza
UMarina Anisina wamangalela inkqubo yeAndrei Malakhov
Ungamnceda njani umntwana ukuba alungiselele kwi-kindergarten?
Indlela yokuphatha uxinzelelo kubantwana
I-Vegetarian Avocado Sauce
Ukushenxiswa kwi-"Doma-2": ngokuhambelanayo nenyaniso kubonisa ukuba abathathi-nxaxheba bafumana kwi-1 yee-euro eziwaka
Ukuphulukiswa kwabasetyhini abakhulelweyo ngexesha lomsebenzi
Iklabishi igqityiwe ngeinanpha
Inloe plant plant
Iintlobo zesikhumba sobuso kunye nokunyamekela
Ikhekhe ngamakhowe kunye ne-stilton cheese